မော်လမြိုင် ရာမညရုံးက ရေဘေးအလှူ ပိုက်ဆံတွေကို ခိုးသွားတဲ့သူ – Wun Yan
ကိုယ်ကယ်ခဲ့တဲ့သူက ကိုယ်ကိုပြန်ဒုက္ခပေးသွားတာ လက်တွေ့ကြုံလိုက်ရပြီ
တနေ့က ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ရဲဖမ်းခံထိပြီး မြန်မာပြည်ရန်ကုန်မှာသွန်ခံထိလို့ ဒုက္ခရောက်နေပါတယ် ဆွေမျိုးတွေမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ မော်လမြိုင် ရာမည အရေးပေါ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့အသင်းရုံးကို ခေါ်လာပြီးတော့ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတယ်
ဒီနေ့ 26.8.2019 မနက်ပိုင်း ရုံးကို အလှုရှင်လာတယ် ငွေ ငါးသိန်းလှုသွားတယ် ရေဘေးအတွက် .. ကျွန်တော့လွယ်အိတ်ထဲကို သေချာထည့်တယ် အပြင်အိတ် အတွင်းအိတ် အဲ့မှာ ကျွန်တော် ပိုက်ဆံထည့်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ကောင်လေးကရှိနေတယ် .
လုံးဝမထင်ထားမိဘူး ကျွေးသောလက်ပြန်ကိုက်လိမ့်မယ်လို့ ..
ခနဘဲကြာတယ် ညီတစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်ပျက်လို့ သွားလုပ်ပေးတာ လွယ်အိတ်ကရုံးမှာထားခဲ့တယ် .. ရုံးနားမှာဘဲဆိုတော့ . 10မိနစ်ဘြဲကာတယ် ကောင်လေးကိုမတွေ့တော့ မသင်္ကာတာနဲ့ ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်ဖွင့်ကြည့်တယ် မရှိတော့ဘူး ပိုက်ဆံ သုံးသိန်းကိုအိတ်ကနှိုက်ပြီးတော့ ကနဲ လစ်ပြေးသွားပြီ . . ခုတော့ လိုက်ရှာနေပါတယ် နီးစပ်ရာများတွေ့ရှိပါက ကျွန်တော့်ဆီကိုဆက်သွယ်၍သတင်းပေးကူညီပေးကြပါဗျာ .. အလှုရှင်တွေရေဘေးအတွက်လှုထားတဲ့ငွေသားတွေမို့ပါ ..
ရုံးတွင်ရှိသော cctv မှတ်တမ်းမှတွေ့ရှိချက်အားဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
ကူညီ၍ share ပေးကြပါဦး